Iingxelo zeNdebe yeFeEx (Indlela abaSebenza ngayo kwi-PGA Tour)
Iingqungquthela ze-CupEx Cup Points kwi-PGA Tour
Uchungechunge lweeNgqungquthela ze-FedEx Cup lwaziswa kwi- PGA Tour ukususela ngo-2007. Iingongoma zonyaka ezenza ukuba abagadi begalufu bazuze amanqaku kwixesha lonyaka. I-top-getters ekupheleni kwenkqubo yeshedyuli ye-FedEx Cup kwangaphambili kwi-FedEx Cup Plaffs, kwaye uyinqobe ibhaso yebhonasi ukusuka kwisikhwama esikhulu semali. Ukuqala ngexesha le-2013, uluhlu lweeNgcaciso zeNgcaciso ze-FedEx luye lwafaka endaweni ye-PGA Uhlu lwemali yokutyelela ukukhetha ukuba yeyiphi igolfu egcina isimo sayo sokuxoxwa ngokupheleleyo kulo nyaka olandelayo.
I-FedEx Cup Basics:
Isiseko esisiseko se-FedEx Cup kwi- PGA Tour yinto elula:
Iveki nganye yegolfu ifumana amaphulo ekugqityweni kwayo kwiintlanganiso ze-PGA Tour; ezo ngongoma zongeza.
Ekupheleni "kwexesha eliqhelekileyo," i-Top 125 kwinqanaba lamaphuzu liya kwi "playoffs."
I-playoffs yinkalo yeethamnethi ezine ekugqibeleni kwi- Tour Championship , emva koko i-FedEx Cup ibonisa iqela elikhuphayo kwaye linikezwa i-$ 10 yezigidi kwi-pool yezigidi ezingama-35.
Ezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqaphele ukuba ixabiso leenqaku liye lixubile kwiimpawu ezikhawulezayo, kwaye zibuye ziphinde zibekwe phambi kweMidlalo yeTyelelo.
I-Fed Ex Cup Yonyaka rhoqo:
Ixesha "eliqhelekileyo" lochungechunge lweFikeEx Cup lusuka kwiveki ye-1 ye-PGA yexesha lokuTyelela kwi- Championship ye- Wyndham phakathi no-Agasti. Iimbasa - I-Masters , i- US Open , iBritish Open , kunye ne- PGA Championship - yinxalenye yexesha eliqhelekileyo, njengeziganeko ze- World Golf Championships ezenzeka phakathi kweVeki 1 ne-Wyndham.
Ezi zihlandlo "eziqhelekileyo" zentengiso nganye ziya kunika inani elimisiweyo lamaphuzu, abagibeli begalufu abahamba ngayo. Ekugqibeleni kwexesha eliqhelekileyo le-FedEx Cup, abo bagadi begolfu abanamaphuzu anele kwangaphambili kwiindawo zokubeka iindawo.
Kwakhona, ixabiso leempawu ezikhoyo kwi-playoffs zizinto ezininzi ezifumaneka kwiikholeji zexesha eliqhelekileyo.
(Ngokomzekelo, ukuba ukugqiba kwi-X indawo bekufanele ukufumana amanqaku angama-300 kwixesha eliqhelekileyo, liya kufumana amanqaku angama-1,500 kwi-playoffs). Ngaphambi kwee-series-Touring Championship, ezi ngongoma zibuye zisetyenziswe ngokusebenzisa ifomula enzima; ukusetha kabusha kunika wonke umntu owenza i-Tour Championship ibhola ekuphumeleleni kobukhosi beCompEx Cup Series.
I-FedEx yePlaffs Cup
Ekugqibeleni kwexesha eliqhelekileyo le-FedEx Cup, ii-Top 125 zegalufa kwiindawo zokubeka phambili kwinqanaba kwi-playoffs, uluhlu lweethamnethi ezine ekugqibeleni kwi-Tour Championship. Emva kweveki nganye ye-playoffs, amasimi anqunywe, de kube kuphela i-golfers ezingama-30 eziya kwi-event.
Iintambo ezine ezineentambo zilandelayo:
I-Northern Trust (i-golf golf 125)
I-Deutsche Bank Championship (i-golfers 100 kwintsimi)
I-BMW Championship (i-golfers ezingama-70 endle)
I-Tour Championship (i-golfers ezingama-30 kwintsimi)
Ukutyunjwa kwintsimi nganye yeeveyoffs kunqunywe ngokubeka uluhlu lwamanani eenkcukacha ze-FedEx Cup. Ngokomzekelo, emva kweVeki yokuqala yee-playoffs, kuphela i-Top 100 kwi-list list points advance to the Deutsche Bank Championship.
I-golfer inop hohlu lwamanqaku alandelayo kwi-Tour Championship ikhuphe i-FedEx Cup iqhawe.
I-FedEx Cup Winners:
Abadlali beGolfers ukuphumelela ukuphiswano lweFikeEx Cup yiyo:
2017 - uJustin Thomas
2016 - uRory McIlroy
2015 - iJordan i-Spieth
2014 - UBilly Horschel
2013 - uHenrik Stenson
2012 - uBritht Snedeker
2011 - iBhili
2010 - uJim Furyk
2009 - iTiger Woods
2007 - iTiger Woods
Iimpawu zeNdebe yeFeEx kunye ne-PGA Tour eligunyazisiweyo:
Abadlali beGolfers bagqiba iiNos 1-125 kwi-FedEx Cup uludwe lwamaphupha kwangaphambili kwiindawo zokubeka. Kodwa kuthiwani ngalawo malungu ePGA Tour ngaphandle kwe-125 ephezulu? Abadlali beGolfers bagqiba iiNos. 126-200 kuluhlu lwamaphuzu bafanelekile kwi-Web.com Tour Finals , edibanisa i-Top 75 kwi-Web.com Uhlu lwemali yokutyelela kunye nalabo baxhasi be- golf ye- PGA abangakwazi ukufumana i-FedEx Cup playoffs.
Abo bantu abayi-150 begalufari bancintisana ngaphezu kweethamnethi ezine, ekugqibeleni apho abafumana imali ephezulu bafumana imeko yokuxolelwa kwePGA Tour kule nkathi elandelayo.
I-Top 25 kwi-Web.com uluhlu lwemali luqinisekisiwe ngamakhadi e-PGA Tour ukuya ekugqibeleni, nangona kunjalo, kunye namanye ama-golfers angama-25 aphuma kwi-Web.com Tour Finals kunye ne-PGA Tour status.
Ukuziphatha kwelo bali: Musa ukugqiba ngaphandle kwe-125 ephezulu kwiinkalo zeeNgcaciso zeNdebe ye-FedEx.
Ukufumana ulwazi oluninzi, kuquka ukuma kwendawo, tyelela i-index ye-FedEx Cup kwi-PGATour.com.
Abadlali beGoli kunye neNtshontsho kakhulu kwiNye yePGA yexesha lokuTyelela
I-Dean & DeLuca I-Tournament Yokumema kwi-PGA Tour
Abanini beBritish Open Winners
Umqhubi we-Golf Open Open Golf
27 Inomdla, Ukukhanyisa - okanye UkuziThabisa nje - Iziqu malunga neeMasters
Hayi, Lady Gaga Akazange Azalwe Indoda
Indlela yokuxhoma iTire kwaye ngokukhawuleza ulungise iPlate yakho
I-Scorpio no-Aquarius Uthando oluhambelanayo
2 Imibuzo Kutheni "iAlto" ngesiSpanish inokuthi "Yeka"
Inkcazo ecacileyo kunye nemizekelo
Iyintoni intsingiselo yePriori ngesiFrentshi
Injongo kunye Nemvelaphi yegama lokugqibela elithi 'Colon'
Kutheni i-Yawns ixhaphazelekile?
Iingqungquthela ezili-10 zeeNkcazo zoBawo
Ukuzimela kweScotland: I-Battle of Stirling Bridge
Iimvolongo zeValentine zeposi kunye nemizekeliso yabaqokeleli
Yazi iBhayibhile yakho-Izifundo ezivela kuNowa